Yangaphakathi Blowout Preventers
I Ukwethulwa Shock Sub Drilling
umlawuli ku 19-03-27
I imishini ukushaqeka esincane athuthukiswe ukwehlukanisa string sokuprakthiza kusukela deflections Axial wadala kancane ngokusebenzisa imishini imisebenzi bese avikele kancane baba ngokweqile ngokusebenzisa imishini imisebenzi. Ithuluzi ngeke ukuncela ukushaqeka umthwalo emhlabeni string sokuprakthiza futhi sokuprakthiza kancane. Kuhlanganisa h ...
Umfutholuketshezi bezihlahla-amathuluzi linqoba kakhulu ku emakethe
Njengoba kuzwakele kubo bonke, mechanical umsiki yangaphakathi is ikakhulukazi osetshenziselwa imbobo we izingxenye ezithile ngaphezu downhole ipayipi ngci, ezifana ukukhiqizwa ubuchwepheshe string, sokuprakthiza ikholomu nokunye. Njengoba kahle, uma yamukelwa e ahlabayo esifike isikhwama zokulala Milling bezinhlamvu of nobukhulu bezinhlamvu ukwakhiwa, nge ...
Ukuhluka esivelele ungenantambo sokuzivivinya
Enye injongo ejwayelekile iningi sokuzivivinya bebelokhu ngensimbi, ngokhuni asathuthuka futhi imisebenzi DIY. Uzothola sokuzivivinya wenza ikakhulukazi ukusetshenziswa kwezokwelapha, ukuhlola umkhathi ngisho izimayini idayimane. Uzothola sokuzivivinya ezinkulu namabhola amancane futhi futhi cishe infinites ...
Umhlaba Amafutha Demand
Umhlaba Amafutha Demand Highlights (November 13, 2015) * Sicela uqaphele ukuthi lezi Highlights bavela yakamuva Amafutha Market Umbiko, okuyinto ikhishwe ngokugcwele ababhalisile kuphela - ngokuvumelana lolu hlelo inyanga ngayinye. Nokho ababhalisile Non uthole ukufinyelela Highlights yakamuva kule schedule, ...
amathuluzi Energy sokuprakthiza
Avame eziqhutshwa ngesandla noma ngamandla kagesi. Kungenzeka futhi abasebenzi kulo mshini njengoba ukufakwa kokumqoka kuphela. Kufanele nje silungise ithiphu ukufakwa kokumqoka kuphela kulo mshini ukuyisebenzisa njengendlela screwdriver. Imishini imishini ayatholakala izinhlobo ezihlukahlukene olususelwa isidingo salo. Izinhlobo ezihlukahlukene ...
Ukusakazwa Ukuhlanekezela (RC) Drilling
ukuzungeza Ukuhlanekezela (RC) imishini isebenzisa ezimbili-ngodonga sokuprakthiza ipayipi (induku) okuqinile sokuprakthiza kancane ukukhiqiza imbobo ukwakheka azikhulule idwala chips (cuttings) kwamanzi ukuze ukuhlaziywa okwalandela. Mshini imishini kuyinto womoya reciprocating piston (isando) nokushayela d tungsten-steel ...
Roller reamers baqashwe emisebenzini isidina amafutha & igesi umkhakha. Umsebenzi oyinhloko roller reamers usike zokwakheka emhlabeni ukuze sandise Borehole usayizi efiselekayo ngesikhathi ukusebenza imishini kahle, okungase usayizi yokuqala bit sokuprakthiza esimweni lapho sokuprakthiza kancane w ...
Downhole Mud Motors Kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko ze-motors downhole inikwa amandla yi-udaka ukugeleza; 1) ophephela, okuyinto ngokuyisisekelo futha centrifugal noma Axial futhi 2) omuhle ukufuduka udaka motor (PDM). Izimiso wokusebenza kuthiwa kuboniswe ePhuzwini futhi ukuklanywa ithuluzi zihlukile ngokuphelele. ...
12345Landelayo> >> Page 1 / 5
Ucingo: + 86-851-87995502
Ifeksi: + 86-851-87995503
Shock Sub Drilling Ithuluzi, Bumper Sub Ukudoba Ithuluzi Ngo Drilling, Two-Way Shock Sub, Ukudoba Izimbiza, Ukudoba Amathuluzi, Reverse Circulation Junk Basket,